Ny hetsika fanaovana varotra sy fizahan-tany dia nidina efa ho 7% tamin'ny volana Jolay
Home » Lahatsoratra farany farany » Fitsangatsanganana an-trano » Ny hetsika fanaovana varotra sy fizahan-tany dia nidina efa ho 7% tamin'ny volana Jolay
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Car Rental • Cruising • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fampiasam-bola • Vaovao lafo vidy • Vaovao • Fitsangatsanganana an-dalamby • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny hetsika fifampiraharahana dia nijanona tamin'ny ambaratonga mitovy amin'ny tsena lehibe toa ny USA, UK ary China, raha India sy Australia kosa dia nahita fanatsarana ny hetsika fifanarahana.
Ny hetsika atao amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fizahan-tany dia mbola mitohy tsy mifanaraka.
Jona dia naneho fambara fanarenana taorian'ny fihenan'ny volana vitsivitsy lasa izay.
Ny fikomiana amin'ny hetsika fifanarahana dia tsy azo notohizana ela.
Fifanarahana 69 (ahitana mergers & recisitions [M&A], fananana manokana, ary famatsiam-bola) no nambara tamin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany nandritra ny Jolay 2021, izay fihenan'ny 6.8% noho ny fifanarahana 74 nambara nandritra ny volana lasa.
Ny hetsika fifanakalozana eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany dia mbola mijanona ho tsy mifanaraka. Na dia naneho fambara fanarenana aza ny volana Jona taorian'ny fihenan'ny volana vitsivitsy lasa izay, ny fihemoran'ny hetsika fifanarahana dia tsy azo notohizana nandritra ny fotoana ela tamin'ny famerenan'ny volana Jolay ny fironana indray. Izany dia azo avy amin'ny famerana ny dia sy ny tsena tsy mahasoa ho an'ny sehatra any amin'ny firenena sasany.
Ny fanambarana ny fananana manokana sy ny fifanarahana M&A dia nihena 58.3% ary 4.7% nandritra ny volana Jolay raha oharina tamin'ny volana teo aloha, raha toa kosa ny isan'ny fifanarahana ara-bola dia nitombo ny 21.1%.
Ny hetsika fifampiraharahana dia nijanona tamin'ny ambaratonga mitovy amin'ny tsena lehibe toa ny USA, UK sy China, raha India sy Australia kosa nahita maso fanatsarana ny hetsika fifanarahana. Mandritra izany fotoana izany, Alemana, Espana ary ny Pays-Bas niaina fihenan'ny hetsika fifanarahana tamin'ny volana Jolay raha ampitahaina tamin'ny volana lasa.